निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक लगायतलाई खुसीको खवर ! – AB Sansar
May 8, 2021 Admin01LeaveaComment on निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक लगायतलाई खुसीको खवर !
काठमाडौं, २४ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तिव्र बनाएको छ । यो वर्ष करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यवधी निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ ।
जसअन्र्तगत कर्मचारीको तलब बृद्धि, बृद्ध भत्ता बृद्धि लगायत छन् । कोरोना महामारीका कारण भत्ता र तलब बृद्धिमा सरकारलाई दबाब भएपनि थोरै भएपनि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै बृद्धभत्ता र तलब बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । जसकारण पनि उनी थोरै भएपनि बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।
गत वर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । कर्मचारीले पनि तलब बृद्धिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा सरकारबाट तलब खाने करिब ६ लाख निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक छन् ।मध्यमकालीन प्रक्षेपणअनुसार करिब १७ खर्बको बजेट
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रस्तुत भएको बजेट योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा साढे २ खर्ब रुपैयाँले कम भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेलको भनाइ छ ।
‘योजना आयोगले चालू वर्षको बजेट १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँजतिको प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो,’ आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यो वर्ष पनि चालू वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारमा बजेट बन्नेछ, कति भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साह्रै महत्वाकांक्षी हुने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवको बजेटमा संशोधन गरेर अझ घटाएको छ । संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्ने अनुमान छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ९१ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र हो । यसकारण पनि आगामी बजेटको आकार थोरैले मात्र वृद्धि हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले कत्रो आकारको बजेट ल्याउला भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित भए पनि सरकारी कागजातले भने आगामी आव ०७८/७९ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘सवा ११ खर्ब हाराहारी राजस्व परिचालन, २ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी बाह्य ऋण परिचालन गर्ने स्रोत अनुमानसहित बजेट बनिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, राजनीतिक तहबाट बजेटको आकारदेखि स्रोत अनुमानलगायतमा थपघट हुन सक्छ ।’
तर, आगामी वर्ष यति ठूलो आकारको बजेट नआउने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कोभिडको गहिरिँदो प्रभावबीच त्यसैमा बढी केन्द्रित हुने र महत्वाकांक्षी हुने छुट सरकारसँग आगामी बजेटमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बाँकेमा कोरोनबाट ३ घण्टामा ५ जनाको मृत्यु
नेपाली चेली अंशु गुरुङको गौरवशाली इतिहास : बनिन् बेलायती सेनाको क्याप्टेन
November 23, 2020 Ab-संसार
भेँडा चराउँदा किसानले फेला पारे करोडौँको उल्का पीण्ड, गरे सरकारलाई दान
May 17, 2021 Ab-संसार
शरीरमा अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी रहेकी विरामी मोडल निशालाई भेट्दा आँचल शर्मा निरन्तर रोइरहिन् June 14, 2021